Gbasara Anyị | Ningbo Horizon Magnetik Teknụzụ Co., Ltd.
Ningbo Horizon Magnetik Teknụzụ Co., Ltd.
Afọ 2011 ahụla ahịa nzuzu nke ihe ala dị egwu, ọkachasị PrNd na DyFe, bụ ndị bụ isi ihe eji edozi magnet nke Neodymium. Ihe nzuzu ahụ mekwara ka ogologo oge nke nnweta ngwa ahịa sie ike ma mee ka ọtụtụ ndị ahịa metụtara magnet chọọ ịchọ ndị nchekwa magnet Neummium. N'ịbụ ndị ndị ahịa chọrọ, na afọ a Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. tọrọ ntọala site na ndị otu ọkachamara nwere ọrụ omimi na ịdị omimi nke ahụmịja.
Iji nweta ukwuu ahịa 'mkpa, anyị na-onwem na ala-nke na-art nnyocha, mmepụta na ule equipments, nke na-enyere anyị na-enwe otu ebe ma na-amụba ibu. Ebe ọ bụ na anyị bụ ụlọ ọrụ na-amị amị nke na-ewepụta tọn 500 nke Neodymium magnet, anyị nwere ike meghachi ngwa ngwa na ọtụtụ ihe ndị ahịa chọrọ gbasara magnet na mgbakọ magnet dị iche iche, dịka magnet Neummium, magnet na-ekpuchi, magnet chamfer na fanye magnet, magnet azụ, magnet ọwa , magnetị nko, ihe mkpuchi magnet, magnet ite, magnet ọfịs, wdg. Ihe karịrị 85% nke magnet na mgbakọ magnet na-ebupụ na Germany, France, UK, US na Japan, bụ ndị dị oke mkpa chọrọ.
N'ihi na nke anyị ọkara size, anyị maara nke ọma na-ajụ-sized ụlọ ọrụ 'ọnọdụ, chọrọ na ihe isi ike. Ya mere, anyị raara onwe anyị nye na-akwado na-enyere ọkara-sized ahịa ịga n'ihu.
Ọzọkwa, ọtụtụ ụdị na nha nke mgbakọ magnetik na-adị na ngwaahịa iji zute ndị ahịa 'nnyefe oge chọrọ.
Nwere ike ịgwa anyị banyere ọrụ gị ma anyị nwere ike inyere gị aka site n'echiche gaa serial Production. N'agbanyeghị ma ị na-emepụta ugbu a, na-emepe emepe ma ọ bụ na-emepụta ihe, ị ga-ekwenye na Horizon Magnetics nwere nka mara mma na ndị otu imepụta nwere ike itinye oge bara uru na usoro dị irè.
Horizon Igwe Ọdụdọ abụrụla ụlọ ọrụ na-aba uru. Valueskpụrụ anyị na-egosipụta ụzọ anyị si agba ọsọ ahịa anyị na ndị mmekọ azụmahịa, ndị ọrụ na ọha mmadụ.
Ibu ọrụ:Anyị jidere ọrụ anyị maka ọdịnihu anyị na ọha mmadụ site na ịmepụta na ịmịpụta magnetị magnet na iji dozie mkpa ndị ahịa anyị n'ahịa na-agbanwe mgbe niile. Anyị na-agba mbọ iji na-akwalite onwe ha ibu ọrụ na otu mmụọ, na-ekere òkè na njikere na nyochaa, nlekota na mgbe nile mma nke anyị na-arụ ọrụ omume, irè na arụmọrụ. Anyi ghotara na oru diri anyi n’obodo anyi bu ihe n’agha site n’inwe ahia nke oma. Ọzọkwa, anyị ga-agbakwa ndị anyị na ha na-azụkọ ahịa ume ka ha nwee ụdị ụkpụrụ omume yiri nke a.
Innovation:Innovation bu isi nkuku nke Horizon Magnetics. Anyị na-achọ mmụọ nsọ kwa ụbọchị site na mmụọ anyị mepụtara ma na-echepụta ihe ọhụrụ mgbe niile site na ịmepụta ihe ndị na-adịbeghị ma na-agbaso ụzọ ọhụrụ ka ọhụụ nke taa wee bụrụ eziokwu nke echi. Anyị na-azụlite ọdịbendị nke ihe ọmụma, nyocha na ọzụzụ ọzọ nke na-emepe ọhụụ ọhụrụ maka ndị ahịa anyị na onwe anyị.
EzigboAnyị na-ele nghọta ziri ezi anya dị ka ọnọdụ nke ụlọ ọrụ anyị nke ọma mgbe anyị na ndị ọzọ na ndị ahịa anyị na-emekọ ihe. N'agbanyeghị ma ị bụ ndị na-eweta anyị ma ọ bụ ndị ahịa anyị, anyị kwesịrị ịkwanyere gị ugwu ma kwanyere gị ugwu! Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-agbaso asọmpi ziri ezi na n'efu na ndị asọmpi.